आकाशमा कसरी चराहरु उड्न सक्छन ? How Can Birds Fly In The Sky? - Nepali Health Media
हामिले देखेको छौ कि चराहरु जब अकाश मा उड्द्छन तब उनिहरु आफ्नो फकेटा तलमाथी गर्दै हल्लाई रहेको हुन्छन ।
यसरी पखेटा हल्लाउदा उनिहरुले वायुमण्डलमा भएको हावालाई उनिहरुको पखेटाले तल तिर दबाउछन अनि वायुमण्डल मा भएको हावाले उनिहरुको पखेटा लाई माथी तिर धकेल्दछ यो बेला उनिहरु उड्ने गर्छन ।
जसरी नाउ चलाउदा पानी लाई पछाडी धकेलिन्छ र पानी को फोर्स ले नाउ लाई अगाडि बढाउछ ठिक त्यसरी नै हावलाई पखेटा ले तल तिर दबाउदा हावाले उनिहरु लाई माथी उडाउने हुन्छ । यहि कारण चराहरु हावामा मज्जाले उड्ने गर्दछन ।
Tags: #fly #Flying #nepalihealth #nepalihealthtips #sky bird bird fly in sky nepali facts Health tips in nepali How can birds fly in the sky nepali nepali health Nepali Health tips nepali science facts science science facts in nepali science in nepali आकाशमा कसरी चराहरु उड्न सक्छन